China Perforated Metal Cladding Inochengeta iyo Chivakwa kubva kuMamiriro ekunze Kukuvadza fekitori nevatengesi | Boegger
Yakawedzerwa simbi muchina unochengetedza
Ferruled simbi isina simbi tambo pajira riya
Ruoko-rwakarukwa simbi isina simbi tambo pajira riya
Architectural pajira riya
chikero mesh keteni
simbi coil inodhira
pajira riya keteni rusvingo
Waya pajira riya bhandi
cheni yekubatanidza keteni
Metal Bead Keteni
simbi isina chinhu girini facade
Perforated simbi yechidziro yekumonera
Perforated Simbi Ceiling
Yakawedzerwa simbi jira
Anoshongedza mesh ekunze ekumonera madziro
Metal Coil Drapery yeSylish uye Inoshanda Interio ...
Stainless Simbi Knotted Tambo Mesh ine Long Service ...
Chainmail Gloves Chengetedza Maoko Ako Akachengeteka
Perforated Metal Cladding Inochengeta iyo Chivakwa kubva Kunze Kwemamiriro ekunze
Perforated simbi yechidziro yekumonera inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira. Inobatanidza kuchengetedzwa kwepachivande uye akawanda mabasa akaita semwenje, kufefetedza mweya, kuzvipatsanura, chezuva
Perforated Simbi Screen yekuvaka Kuputira
Perforated simbi yechidziro yekumonera inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira. Inobatanidza kuchengetedzwa kwepachivande uye akawanda mabasa akaita semwenje, kufefetedza mweya, kuzvipatsanura, chezuva. Chinonyanya kukosha, inochengetedza zvivakwa kubva pakushanduka kwemamiriro ekunze.
Perforated simbi ine yakagadzikana zvinhu zvivakwa uye yakakwira simba kune huremu reshiyo, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuvaka zvivakwa zvitsva uye kugadzirisa zvekare zvivakwa.
Mushure mekurapwa kwepamusoro, yazvino manyorerwo chitarisiko chichaita kuti chivakwa chiwedzere kuve chakasiyana uye chiratidzo.
Aluminium Perforated Metal Kupeta
Yakavezwa Perforated Metal Cladding
Mashoko ndiwo anonyanya kukosha.
Yakapetwa simbi yekufukidza inofanirwa kuratidzwa kunze nekunze uye inoda nzvimbo yakakura, saka simba rezvinhu uye kuramba ngura kwakakosha. Zvakare pamwe nehuremu-hwehuremu huchifunga nezvematambudziko mukuvakwa uye kugadzikana kwechimiro chimiro.
Aluminium ndiyo inonyanya kushandiswa zvinhu.
Yakakwira ngura kuramba. Kureruka kurema. Chitarisiko chakanaka mushure mekuzora.
Weathering simbi zvakare inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakaipa dzemamiriro ekunze, nekuti ine yakanakisa inorwisa mamiriro ekunze.
Round Hole Perforated Kuvaka Cladding
Perforated simbi pani ine mativi gomba chimiro uye yesirivha pamusoro.
Iwo ekuvhara maburi mhando anomiririra iwo wekushongedza kukosha kwezvivakwa.
Kune mapfupi mafashoni, anogara akarongedzwa maburi mapatani, senge akatenderera uye akaenzana akakurumbira.
Kune yakasimba yekuona kukanganisa, yakagadzirirwa gomba chimiro uye saizi zviripo.
Nzvimbo dzakasununguka dzakasununguka dzinopa mweya wakanaka. Vazhinji vagadziri vanosarudza 35% yakavhurika nzvimbo yekuyera pamusoro pezvinhu, sekuvhenekesa, kufefetedza mweya, kuzviparadzanisa, sunscreen uye kuchengetedzwa kwepachivande.
Kurapa kwepamusoro kunosanganisira kupfeka kweupfu uye anodizing.
Kupfeka kwehupfu kunopa akawanda mavara esarudzo yekufukidza iyo yekutanga simbi pamusoro, iyo inogona kubatsira anti ngura uye ngura kuramba.
Anodizing inogona kuchengetedza kubwinya kwesimbi apo ichidhaya simbi. Iyo inowanzo shanda kune aruminiyamu mapaneru, ayo anogona kudzivirira iwo mapaneru kurwisa oxidation uye ngura.
Yakakombama perforated pani chivakwa kuputira
Kunze kwepamusoro pezvinhu, vagadziri vaizotarisawo marongero akakosha ezviputi zveforamu. Tinogona kubatsira kungo kugadzirisa mapaneru sekukotama kana kupeta.
Yedu perforated simbi yechidziro yekufukidza inoshandiswa zvakanyanya muzvirongwa zvakasiyana, senge nzvimbo dzekupaka, chiteshi chezvitima, nzvimbo dzekutengesa, zvipatara, dzimba dzekugara etc.
Pashure: Stainless Simbi Rope Mesh Green Wall Yekukwira Zvirimwa
Zvadaro: Perforated Simbi Screen yekuvaka Ceiling
Kushongedza Mesh yekuvaka Kupfeka
Perforated Simbi Screen yekuvaka Ceiling
Stainless Simbi Rope Mesh Green Wall yeClimbi ...
Yakawedzerwa Simbi Yakaiswa kune iyo Chivakwa Inobatsira Re ...
Unoda kuziva rumwe ruzivo?
Taura nesu nhasi kuti tibvunze.
Pindura kwauri nekukurumidza sezvazvinogona
Kero:East maindasitiri Zone, Anping, Hebei, China
Isu takavhura: Mn-Fr: 9: 00 am-6: 00 pm